ao amin’ny faritra iadidiany izay toherin’ny mponina. Nambarany omaly fa haato mihitsy aloha ny fananganana ity pylone ity izay nialohavan’ny asa fanamboarana ilay vy misandrahaka napetraka tamin’ilay trano hasiana azy sao mandratra olona. Hampanao fihaonam-be indray izy ka hisy ny fiantsoana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao anatin’ny ad hoc izay natsangana mba hitondra fanazavana amin’ny mponina sy handresy lahatra ireto farany. Tafiditra ao anatin’izany ny dokotera izay hiverina hanazava amin’ny antsipirihany ny fiantraikan’ny pylone amin’ny fahasalaman’ireo mponina manodidina ny toerana hametrahana azy. Nomarihin’ity Ben’ny tanana ity moa fa tetikasan’ny filoham-pirenena ny fananganana pylone tahaka izao ka tsy azony toherina. Ny filankevitry ny tanana ihany koa, hoy izy no nanapa-kevitra tamin’ny fandraisana izany fa mpanatanteraka fotsiny ny Ben’ny tanàna.